ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သိန်း ၂၀၀၀ ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များ လှူဒါန်း. | dawnmanhon
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သိန်း ၂၀၀၀ ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များ လှူဒါန်း.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရ ဝန်ကြီးများ၏ လစာငွေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပါတီထူထောင်ရေးအတွက် လစဉ်စုဆောင်းခဲ့ရာ ယင်းအနက်မှ ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ကိုအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့(ဇန်န၀ါရီ ၉ရက်) မွန်းလွဲတစ်နာရီက ရန်ကုန်မြို့ရှိ NLD ပါတီ ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပါတီနာယက ဦးတင်ဦးက လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) ကိုယ်စား ရန်ကုန်တိုင်း လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက လက်ခံရယူခဲ့သည်။
NLD ပါတီ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ရုံးများ တည်ထောင်ရေး အပါအ၀င် ပါတီထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်၍ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရ ၀န်ကြီးများ၏ လစာငွေ များထဲမှ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းကို လစဉ်စုဆောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
dawnmanhon: ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သိန်း ၂၀၀၀ ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များ လှူဒါန်း.